सर्वश्रेष्ठ गन्तव्यहरू युरोप मा एक सप्ताह समयमा यात्रा गर्न | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > सर्वश्रेष्ठ गन्तव्यहरू युरोप मा एक सप्ताह समयमा यात्रा गर्न
रेल लागि विमान खाई र एक सप्ताह आश्चर्य लागि युरोप यात्रा. सेव एक ट्रेन कुनै जोडी शुल्क यसलाई मिनेटमा बुक गर्न सजिलो बनाउँछ, त्यसैले तपाईं आनन्द उठाउन सक्छौं आफ्नो बचत मा गतिविधिहरु! यहाँ हाम्रो छनोटहरू लागि हो युरोप मा सबै भन्दा राम्रो गन्तव्यहरू रेल द्वारा एक सप्ताह समयमा यात्रा गर्न.
सर्वश्रेष्ठ गेटवे युरोप मा गन्तव्यहरू एक सप्ताह समयमा यात्रा गर्न: बार्सिलोना
हामी केही समय स्पेन बारेमा chatted गर्नुभएको. तपाईं हाम्रो अन्य लेख जाँच गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ. आज, हाम्रो सुझाव युरोप मा सबै भन्दा राम्रो गन्तव्यहरू रेल द्वारा एक सप्ताह समयमा यात्रा गर्न बार्सिलोना मा बस ध्यान छ.
बार्सिलोना युरोप को सबै भन्दा भागबाट पहुँच एकदम सजिलो छ, तर सन्दर्भ सजिलो को लागि, हामी बाट छोडेर गरिने लन्डन यो यात्राको लागि. मा काम छोड्न2एक शुक्रबार बजे, को फसाउन समयमा3बजे पेरिस गर्न Eurostar. त्यहाँ एक एक Vin रूज लागि बस समय parisian क्याफे बार्सिलोना गर्न "रेल होटल" बोर्डिङ अघि.
अब तपाईं त्यहाँ हुनुहुन्छ भनेर, के गर्ने:
बार्सिलोना मा शायद सबै भन्दा प्रसिद्ध संरचना, को Sagrada परिवार. को Basilica architect Gaudí द्वारा डिजाइन भएको थियो र तिनीहरूले कहिल्यै पछि यो संरचना निर्माण गरिएको छ 1882. यसलाई हार्ड क्रेन बिना तस्वीर प्राप्त गर्नुपर्छ, तर यो मूल्य एक यात्रा निश्चित छ.
गोप्य बार्सिलोना टिप: को Basilica को पीठ मा तपाईं अचम्मको फोटो लिन सक्छ जहाँ एक सानो पोखरी छ. तपाईँको इन्स्टाग्राम खेल बलियो राख्न, र यो स्थान एक यात्रा तिर्न.
एकGaudí द्वारा nother प्रसिद्ध संरचना कासा Batllo छ. लस Ramblas टाढा छैन स्थित, तपाईं Passeig डे Gracia यो विशेष भवन फेला छौँ. यसलाई मा बनाइएको थियो 1877. तपाईं यो भवन गएर र पनि भित्र हेर्न चाहने कल्पना भने, बनाउन तपाईंले अग्रिम टिकट खरिद निश्चित, यो एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण बार्सिलोना र एकदम व्यस्त प्राप्त गर्न सक्छन्, विशेष गरी उच्च सिजन मा.
रमाइलो: कासा Batllo हालको मालिकले Bernat परिवार छ, known for being the owners of Chupa Chups lollipops.
घर टाउको समय.
को9आइतबार रातको बेलुका रेल होटेल तपाईंलाई मध्य लन्डनमा फिर्ता भेट्छ 11:55 सोमबार छु.
सर्वश्रेष्ठ गेटवे युरोप मा गन्तव्यहरू एक सप्ताह समयमा यात्रा गर्न: रोम
अनन्तका शहर कहिल्यै रूपमा alluring छ र हामी एक सप्ताह Getaway बारेमा यो बिना कुरा सकेन! लागि पेरिस एक lunchtime Eurostar र परिवर्तन लिन रोम. को मा खाने भन्दा Linger रेस्टुरेन्ट कार, गर्न रिटायर आफ्नो ताजा स्थिति वा रातको लागि couchette, र एक क्लासिक इटालियन परिदृश्य गर्न सकृय.
रोम सजिलै मध्ये एक छ हाम्रो मनपर्ने शहर यूरोपमा. तपाईं सुहागरात मा हुनुहुन्छ, विशेष गरी यदि. तपाईं पढ्न सक्नुहुन्छ यहाँ. त्यहाँ सबैका लागि केहि हुनत छ. ठाउँ ठाँउहरु संग टोपीको घेरा गर्न भरिएको छ र नै मा स्तरित इतिहास को वर्ष हजारौं छ - तपाईं पुनर्जागरण गर्न रोमन भग्नावशेष बाट यहाँ सबै पाउनुहुन्छ कला. यो शानदार घर पनि छ खाना! पक्कै पनि3रोम दिनहरुमा शहर प्रस्ताव छ बिल्कुल सबै हेर्न पर्याप्त छैन, तर यो सबै विशेषताहरू हेर्न निश्चित पर्याप्त छ यदि तपाईं प्रभावकारी आफ्नो समय व्यवस्थापन.
भ्याटिकन सिटी तपाईको रोम भ्रमणको लागि हाम्रो सूचीमा पहिलो चीज हो. यसलाई आफ्नो एक देशको, रोम भित्र, र सहित विश्व-प्रसिद्ध साइटहरु घर हो भेटिकन संग्रहालय, को सिस्टिन चैपल, र सेन्ट. पत्रुसको Basilica.
हामी तपाईंलाई प्रारम्भिक यहाँ आउन र संग भेटिकन संग्रहालय लागि सीधा टाउको सिफारिस आफ्नो लाइन छोड्नुहोस् टिकट. हामी थप यो पोस्ट मा रोम मा रेखा छोड्न तरिका कवर, तर तपाईंले समस्त रोम र भेटिकन पास खरीद यदि, तपाईं आफ्नो लाइन छोड्न प्रविष्टि लागि timeslot पूर्व-बुक गर्न विकल्प हुनेछ.
युरोप मा सबै भन्दा राम्रो गेटवे गन्तव्यहरू एक सप्ताह समयमा यात्रा गर्न: ब्रसेल्स र एम्स्टर्डम
नयाँ-इश उच्च गतिको Eurostar संग एम्स्टर्डम लन्डन तालिम. लन्डन र ब्रसेल्स बीच यात्राको लिन प्रयोग5घन्टा र ब्रसेल्स मा रेल परिवर्तन संलग्न. नयाँ रेल इच्छा परिवहन 900 यात्रु एक दिन मात्र हुनेछ4घण्टा. साप्ताहअन्त लागि ब्रसेल्स वा एम्स्टर्डम एउटा यात्राको लागि उत्तम!
एक सप्ताह गेटवे समयमा ब्रसेल्स मा के गर्न:
त्यहाँ ब्रसेल्स मा गर्न यति धेरै कुरा छन्, विशेष गरी छोटो सप्ताह यात्रा मा. यो एक लामो सप्ताह लागि पूर्ण छ ती शहर को एक हो, अन्वेषण सबै ऐतिहासिक साइटहरू र गिल्ला सबै वाफल्स तपाईं आफ्नो हात प्राप्त गर्न सक्छन्.
यो तपाईं ग्रैंड ठाउँ कति पटक भ्रमण कुरा छैन, यसलाई सधैं भ्रमण गर्न त सुन्दर छ कि एक क्षेत्र हो. लगभग फिर्ता डेटिङ 300 वर्ष, महान् स्थान सम्झना गर्न निकै भव्य छ.
वर्ष को केही समय मा, तपाईं पाउन छौँ, केही विभिन्न घटनाहरू, बजार, र कला प्रतिष्ठानहरु. दुवै वर्ग मा बैठे छन् भनेर ब्रसेल्स शहर संग्रहालय र टाउन हल भ्रमण गर्न नबिर्सनुहोस्.
पेरिस Liege गाडिहरु
ब्रसेल्स गर्न Liege गाडिहरु
ब्रसेल्स भन्दा ठूलो छ (र संभवतः, को grandest) युरोप को सबै अदालत. अब, त्यहाँ हाल केही restorations निरन्तर काम तर आफ्नो यात्रा रोक्न हुँदैन हो - साँच्चै एक भव्य भवन.
तपाईं हाम्रो सुझाव के लाग्छ? हामी जान्न चाहन्छौं! सम्झनु, एक ट्रेन सेव सुपर प्रयोग गर्न सजिलो छ र लागत लुकाउँछ कहिल्यै! हाम्रो साथ रेल द्वारा दूर आफ्नो सप्ताहन्त बुक, आज!
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन र बस सक्नुहुन्छ यो ब्लग पोस्ट एउटा लिङ्क हामीलाई क्रेडिट दिन, वा यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feurope-travel-during-weekend%2F- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
तपाईं आफ्नो प्रयोगकर्तालाई दयालु हुन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं हाम्रो खोज पृष्ठ मा सिधै तिनीहरूलाई मार्गदर्शन गर्न सक्छन्. यो लिंक मा, तपाईं हाम्रो सबै भन्दा लोकप्रिय रेल मार्गहरू पाउनुहुनेछ – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. तपाईं अंग्रेजी अवतरण पृष्ठ को लागि हाम्रो लिंक भित्र, तर हामी पनि छ https://www.saveatrain.com/ru_routes_sitemap.xml, र तपाईं परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ /ru /गर्न ja वा /tr र अधिक भाषा.
#casabatllo #palaisdejustice #sagradafamilia #सप्ताह बार्सिलोना eurostar छुट्टी ट्राभेलमस्टरडम travelrome vaticancity